conscience | Sahaja yoga in Madagascar
Posted by Peter in Sahaja yoga.	Tagged: Antananarivo, Compassion, conscience, Création, L'Esprit, Malagasy, meditation, spiritual, spiritualité, yoga Antananarivo, yoga Méditation.	Leave a comment
Conférence et Méditation gratuites
chaque dimanche, 10h.
Lieu : Lycée Technique
Commercial – AMPEFILOHA, 3ème étage
Tél : 034 43 109 31 ou
032 07 254 51 ou
033 75 634 41
Posted by benirastro in Sahaja yoga.	Tagged: boky, conscience, demokrasia, fanandevozana, fanapotehana, fiarahamonina, Firenena Mikambana, Fisavorivoriana, kaominisma, modely, Mosesy, vola.	Leave a comment
“Tokony ho fantatra fa ireo fotoana maoderina dia fotoan’ny fisavorivoriana. Tsy fantatrareo izay tadiavinareo. Tsy fantatrareo izay zavatra tianareo angatahana. Tsy fantatrareo na tsara na ratsy ny zavatra ataonareo. Ilaina io fisavorivoriana io. Raha tsy misy ny fisavorivoriana, tsy diso fanantenana isika. Raha tsy misy ny fahadisoam-panantenana, tsy mitady isika.
Fa ny fisavorivoriana dia tsy hita raha tsy tonga amin’ny seha-pahatsiarovantena na, raha azo lazaina, haavo eo amin’ny fahatsiarovantena. Ohatra, tamin’ny fotoana nahatongavan’i Mosesy teto an-tany, izay hafa tanteraka ny fahadisoam-panantenana tamin’izany, fotoana izay notadivin-dry zareo ialana amin’ny fanandevozana, nanana fomba fijery hafa izy ireo. Ahoana no fomba andrindrana ny fiarahamonina izay manaraka ny modely manokana, mba afahana mahazo ny fahombiazana avo indrindra ao anatin’io fiarahamonina io ?
Zavatra tena maika izany tamin’izany fotoana izany. Hetsika tena feno fahasahian’ireo Jiosy izany, tamin’izany fotoana izany. Niseho tamin’ny firenena maro koa izany, tamin’ireo taranaka nifandimby maro, izay tonga tamin’ny sehatra izay nahatsapan’ny olombelona ny fahadisoam-panantenana. Hita mivantana ny fanandevozana ny zanak’olombelona tamin’izany fotoana izany.
Fa talohan’izany, tsy nitaraina tamin’ny fanandevozana ny olona. Neken’izy ireo izany. Noheverin’izy ireo fa miankina amin’ny tsirairay avy izany. Tao aoriana dia tonga anefa ny fotoana izay nahatsapan’izy ireo : « fanandevozana izao, tsy ilain-tsika intsony izany ». Nisy mpitarika tonga, ary nandresy ho an-dry zareo io sefo io.
Ankehitriny, amin’izao fotoana vaovao izao, misy karazam-panandevozana tena lalina, izay mikiky antsika isan’andro, izay tena manimba tena ary tsy tsapantsika akory izany, ary potik’izany isika. Miseho amin’ny endrika maro io fanapotehana io, ary raha tsy fohazintsika ny marina, mety tsy hisy zavatra hiangana amin’izao zava-misy izao. Misy ireo olona manao kabary lava reny. Nahita olona manana toerana ambony maro Aho, tao amin’ny Firenena Mikambana ary ihany koa tamin’ireo fikambanana goavana maro.
Miresaka ny fanapotehana ho avy izy ireo, ny fifandonana amin’ny hoavy, ary hiseho izany. Manoratra boky, boky matevina izy ireo. Mipetraka eny amoran-dàlana izy ireo ary mitafa. Anaty dokambarotra izy ireo, mifanakalo hevitra izy ireo. Anaty lanonana amin’ny alina izy ireo, miresaka izy ireo. Fa tsy fantatr’izy ireo ny tena dikany. Io fanapotehana io dia karazam-pamotehana izay tsy mbola nisy tany aloha tany. Satria io fanapotehana io dia hiainga avy ao anaty fa tsy avy any ivelany. Nahatratra sehatra lalin-dalina kokoa isika eo amin’ny fahatsiarovantena, ary raha tsy mikitika ny fototry ny sakafontsika isika, dia handresy io fanapotehana io.
Ho an’ny olona maro, « O ! tsy misy dikany izany, avelao amin’izao, hokarakaraintsika izany!” Ny olona sasany dia manana izao fomba fisainana izao : « Ok, avelao amin’izao, fanapotehana inona ? O, tsy maninona izany, ho hitantsika izany rahampitso. » Ary ny sasany amin’izy ireo, Hitako izany, mipetraka miandry : Andriamanitro ô, misaotra an’Andriamanitra, misy ny fanapotehana, ary tapitra hatreo izany. Ah ! Tsy misy hivakintsika loha ny amin’izany. Misaotra an’Andriamanitra, ito ny fanapotehana nampanantenaina. »
Na inona inona fomba handraisana izany, tokony ho fantatsika fa zavatra tena marina izany. Tonga amin’ny seha-pivoarana avo indrindra ny famoronana ankehitriny. Ny fitomboana dia miseho amin’ny olombelona. Ireo olombelona ireo no mpilalao ambonin’ny sehatra. Ny natiora iray manontolo dia ho an’io fotoam-baovao io.
Zavatra tokana no tokony ho tonga ankehitrio, tokony hifandray amin’ny Masina ianareo. Tokony hifandray amin’Izao rehetra izao ianareo. Tokony ho fantatrareo ny momba anareo ary tokony ho fantarinareo ny tanjonareo. Raha mety ho tonga izany, dia an’ny tontolo hafa ianareo. Noforonina ianareo ho an’izany. Natao ho olombelona ianareo ho amin’ny tanjona sasantsasany.
Tokony hisaina ianareo, ireo mpikaroka (scientifiques) rehetra dia tokony hametraka ity fanontaniana ity fara-faharatsiny indray mandeha : Niantomboka tamin’ny sehatry ny biby, maninona isika no tonga amin’izao sehatra izao, inona no antony ?”
Miasa ao amin’ny inconscient-ny mpikaroka tsirairay io fanontaniana io ankehitriny. Izany no mahatonga ireo mpikaroka maro manerantany. Ary ireo mpikaroka ireo dia mikaroka fotsiny hoe : “Maninona isika no eto?”
Mahita valiny materialy ny sasantasany indraindray. Ohatra, ireo fikonana amin’izao fotoana izao. Ao amin’ny fitaterana an-dalamby. Fomba fijery tena tery izany, fijery tena tery. Te hahazo vola bebe kokoa ianareo, ekena, inty, fa avy inona ? Misy ireo miresaka kaominisma.
Nandeha tany Moscou Aho, Hiverina any Aho atsy ho atsy. Ny tiako ho lazaina, raha manontany azy ireo ianareo, dia hovalian’izy ireo : “O, tsy manana hafaliana izahay.” Tsy manohatra ny kaominisma aho na ihany koa ny demokrasia. Hanihany izy roa ireo Amiko.
Tsy kaominista ianareo, na demokraty. Aorian’ny Fahatanterahana ara-Panahy ihany ianareo vao afaka ho izy roa miaraka. Satria tsy manam-pahefana ny ho kapitalista ianareo na demokraty, tsy manana fahefana ny hifidy ianareo. Tsy misy fantatrareo ny momba anareo. Inona no antony hifidiananareo ? Tsy ho hitanareo izany…”
1982-07-09 Confusion: the Subtle Slavery, Birmingham
Shri Krishna Puja with Shri Mataji